Izindlela Ezi-10 Zokugubha Usuku Lomhlaba! - Isikhungo se-EcoTechnology
Namuhla kugujwa iminyaka engama-51 yoSuku Lomhlaba! Isikhulu sokuqala Usuku Lomhlaba yabanjwa ngo-1970 lapho abantu baseMelika abayizigidi ezingama-22 behlanganyela emihlanganweni, amamashi, nezinhlelo zemfundo zokukhuthaza umoya ohlanzekile, umhlaba namanzi. Kusukela lapho, uSuku Lomhlaba selukhule lwaba umgubho womhlaba wonke wokuqwashisa ngezinkinga zemvelo nokukhuthaza ushintsho oluhle ukubhekana nokukhathazeka kwesimo sezulu. Gubha uSuku Lomhlaba nathi namuhla ngokunciphisa i-carbon footprint yakho ngalezi zindlela ezilula!
1- Misa ngemakethe yakho encane yasendaweni- Thenga imikhiqizo nokudla okwenziwe endaweni futhi kukhuliswe. Lokhu kunciphisa kakhulu izibaseli ezisetshenziswa lapho kuthuthwa izimpahla zisuka kude. Qiniseka ukuthi ubheka ukuthi banesigaba esiningi sokudla, futhi khumbula ukuletha izikhwama zakho ezingasetshenziswa kabusha! Lokhu futhi kuyindlela enhle yokuxhasa amabhizinisi akho amancane endawo.
2- Hlela ukuhlolwa kwamandla ekhaya- IMisa Londoloza futhi Uhlelo lwe-Home Energy Loss Prevention Services (HELPS) nikeza ukuhlolwa kwamandla kagesi okungabizi izindleko ukusiza abaninikhaya benze ngcono izindlu ezonga imali, ugesi, nokushisa uphethiloli. Abasebenzi abaqinisekiswe yi-BPI bazosiza ekuhlonzeni nasekubekeni phambili ukuthuthuka okungabizi kakhulu ekhaya lakho futhi bakwazise ngezaphulelo nezikhuthazo zokwenza ukuthi kutholakale kangcono. Bhalisa lapha!
3- Hlobisa kabusha ikhaya lakho ngezinto ezibuyisiwe nezisindisiwe- Isitolo sethu, Izidingo ze-EcoBuilding, yisitolo sezinto zokwakha esikhulu kunazo zonke esenziwe kabusha futhi esisele eNew England! Kutholakala eSpanish, MA, naku-inthanethi ku EBay. Ukusebenzisa izinto ezibuyisiwe esikhundleni sezintsha kuyindlela enhle yokunciphisa i-carbon footprint yakho. Yima nge-EcoBuilding Bargains noma isitolo sakho sendawo esidayisa izimpahla ukuze uthathe izingcezu ezihlukile ezitakuliwe!
4- Ingabe umthwalo wanamuhla welondolo emanzini abandayo- Lokhu kudala ukonga amandla okukhulu ngokungafudumezi amanzi, okungakusindisa nemali nawe! Futhi ungakhathazeki, i-detergent yokuhlanza izingubo isebenza kahle nasemanzini abandayo.
5- Hlola ulwazi lwakho mayelana nokusebenzisa kabusha- Ukuvuselelwa kweSmart MA inemibuzo yemizuzu emibili emnandi yokukusiza ukuba ube yisikhuni esisebenzisa kabusha ngobuchule. Thatha imibuzo lapha!
6- Phuza ngaphandle kwebhodlela lakho lamanzi elingasetshenziswa kabusha- Uzobe usiza imvelo ngokunciphisa ipulasitiki yokusebenzisa kanye futhi ube nengilazi eyodwa encane ukusebenzisa imali, amandla, nokuhlanza amanzi ngemuva kwalokho.
7- Beka izingubo ezingadingeki ngomnikelo- Izindwangu zinikela U-8-10% we-CO2ukukhishwa emhlabeni jikelele. Ukusetshenziswa kwamandla ekukhiqizeni izindwangu nokuthumela imikhiqizo yokugcina kubaluleke kakhulu kwazise imboni yendwangu ithembele kakhulu kumafutha ezimbiwa phansi. Ngakho-ke qiniseka ukuthi unikela ngezingubo zakho ukuze ziphinde zigqokwe noma ziphinde zenziwe kabusha!
8- Uma ukwazi, hamba ngebhayisikili noma yikuphi lapho udinga ukuya khona namhlanje- Lokhu akugcini nje ngokunciphisa ukukhishwa kwe-CO2, kunempilo emzimbeni wakho futhi!
9- Vala amalambu angeziwe ne-elektroniki- Cisha noma yimaphi amalambu uma ungekho kulelo gumbi futhi ukhiphe amadivayisi kagesi lapho engasetshenziswanga ukonga amandla!
10- Gwema ukudla inyama namuhla- Ukukhulisa imfuyo kudinga umhlaba omkhulu, amanzi, izinsizakusebenza namandla. Ukukhiqizwa kwemfuyo kukhiqiza amagesi abamba ukushisa amaningi kunawo wonke umkhakha wezokuthutha emhlabeni - izimoto, amaloli, izitimela zezindiza - kuhlangene. Ukweqa inyama ngisho nosuku kungenza umehluko omkhulu!
Siyethemba futhi ukuthi uzohlanganyela nathi emini ngomhlaka ingxoxo emisha eCET, ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi sikwazile kanjani ukufeza izinhloso zethu, nokuthi yini esethemba ukuyifeza ngokuzayo!
By UChiara Favaloro|2021-04-21T20:24:28-04:00Ngo-Ephreli 21st, i-2021|Inyanga Yomhlaba|
Usuku Lomhlaba Lugubha Iminyaka Engu-50!
Ngo-Ephreli 22nd, i-2020 | 0 Amazwana
Inyanga Yomhlaba Ejabulisayo!
Ngo-Ephreli 1st, i-2019 | 0 Amazwana